Weerar kale oo ka dhacay Denmark iyo Ciidamada booliiska oo toogtay ninkii weerarka fuliyay+ Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Weerar kale oo ka dhacay Denmark iyo Ciidamada booliiska oo toogtay ninkii weerarka fuliyay+ Sawiro
Waxaa xalay mar kale uu weerar dhaliyay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay Magaalada Copenhagen ee caasimadda dalka Denmark, Weerarka labaad ayaana ka dhacay meel aad ugu dhawaa Dhismo ay ku cibaadeestaan Dadka Yahuuda .
Nin hubeesan oo wajiga soo xirtay ayaa toogtay hal qof waxa uu sidoo kale dhaawac u geestay qof oo kale oo la sheegay in ay katirsanaayeen Ciidamada booliiska, waxaana goobta isaga cararay ninkii hubeesnaa ee weerarka geestay.
Booliska ayaa xaqiijiyey in ninkaani weerar ku qaadey ciidamo Boolis ah oo ku sugnaa Nørrebro halkaas oo Boolisku ku toogteen, Booliska ayaa sheegaya in weerarkan ninkaani uu keli ku ahaa, laakiin uu socdo baaritaan weyn oo gadaal laga shaacin doono qofka uu yahay.
Goobtan uu weerarka labaad uu ka dhacay ayaa qiyaastii 5-km waxa ay u jirtaa halkii uu ka dhacay Weerarkii hore oo ahaa goob maqaayad ah uu kasocday dood ku saabsan farashaxanka iyo xuriyatul qoylka, waxaana weerarkaasi lagu dilay qof kale.
Maqaayada Weerarka hore uu ka dhacay waxaa ku sugnaa kartooniiste lagu magacaabo Lars Vilks oo u dhashey dalka Sweden isla markaana caan ku ahaa daabicista sawiro kartoon ah oo uu ku aflagaadeeyay Nebi Maxamed (NNKH), waxaana la sheegay in uu ka badbaaday weerarka, waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa weerarkana ka bad baadaySafiirka Faransiiska u fadhiya ee Denmark.
Booliiska magaalada Copenhagen ayaa wali wada baaritaano ay ku baadi goobayaan ragii weerarka fuliyay, walina kalama cada in labada weerar ee xalay ka dhacay magaalada Copenhagen ay xariir leeyihiin iyo in kale.